एक्सक्लुसिभ : इन्काउन्टर पछि कुमार श्रेष्ठ घैटेको कोठामा यस्तो देखियो - Himalayan Kangaroo
एक्सक्लुसिभ : इन्काउन्टर पछि कुमार श्रेष्ठ घैटेको कोठामा यस्तो देखियो
Posted by Himalayan Kangaroo | ५ भाद्र २०७२, शनिबार ०३:३५ |
काठमाडौं । कुमार श्रेष्ठ घैटेलाई गुण्डा नाईके भनेर चिनिन्छ । लामो समयदेखि अपराधिक गतिविधी संचालन गरेर अकृत सम्पत्ति कमाएका छन् । प्रहरीका मोस्ट वान्टेड सूचीमा परेका गुण्डा । चन्दा आतंक र ठेक्कापट्टाबाट करोडौं सम्पत्ति जोडेको अभियोग उनीमाथि छ । बिहीबार उनी प्रहरीको फायरिङमा मारिए । उनी केही आफन्तसंग कपुरधारा चोक अगाडीको साँघुरो गल्लीमा बस्दै आइरहेका थिए । उनको घरमा साँझतिर पुग्ने मौका मिल्यो । चिनजानका उनका आफन्त पर्ने एक साथीले जाउ भनेपछि मैले हुन्छ भनेर हिडियो । किनकी एउटा डनको घर र उसको रहनसहन कस्तो होला भनेर हेर्न मन लागेको थियो । घैटेलाई इन्काउन्टर गरिएको ठिक अगाडीको घर देखाउँदै उनका आफन्तले यही हो घैटेको घर भनेर देखाए । मैले जब घर हेरेँ । म तीन छक्क परँे । मैले सोचेको भन्दा ठिक उल्टो दृश्य त्यहाँ देखिएको थियो । अकृत सम्पत्ति कमाएका व्यक्ति त्यसमाथि डन यति सामान्य घरमा बस्छन् ? पुरानो एक तलाको कच्ची घरमाथि जस्ताले छाएको भूकम्पबाट जोगिएको घर । हामी सानो निलो गेटबाट भित्र पस्यौ । लेउ लागेर एकदमै चिप्लोबाटो ।
‘बिस्तारै हिडनुहोस् है, बाटो निक्कै चिप्लो छ’ त्यहाँ उभिएकी एकजना महिलाले हामीलाई सम्झाइन् । एउटा लिखुरे कुकुर पनि खोरमा थियो । मालिक मारिएकोले हो की कुकुर पनि सुस्त थियो । हामी घरभित्र प्रवेश ग¥यौ । हामीले डन कुमार घैटे बस्ने कोठा हे¥यौ । (हेर्न तस्वीर) । पुलिसको खानतलासीले कोठामा सामानहरु छरपष्ट थिए । होचो कोठा, पानीले ओस्सिएको भित्ताहरुबाट माटोको जस्तो गन्ध आईरहेको थियो । दुई दराज र एउटा बेडमात्र अटाएको कोठाको झ्यालमा रहेको फोटोमा यसपटक कुनै डनको गर्जन होईन मलिन अनुहारमा उनी आफ्ना गल्ती सम्झिँदै टोलाएको जस्तो देखिन्थ्यो ।
पर्दामा केही कार्यक्रमका व्याचहरु झुण्ड्याईएका थिए । डनको यस्तो बसाई जसको नाम सुन्ने वित्तिकै बाहिर मान्छेहरु पैसा र पेस्तोलको व्यक्ति सम्झेर तर्सिन्छन् । अचम्म लाग्यो । फेसबुकमा पैसाको बिटा अगाडि बसेर पोज दिने घैटेले आखिर त्यत्रो अकुत सम्पत्तिले के के गरेछन् । कहाँ लुकाई राखेका होलान् त ? अनि किन यति असुरक्षित घरमा र यति असुरक्षित पाराले बसेका होलान् उनी ? प्रश्नप्रश्नै बोकेर फर्कियौं ।
Previousकैलालीमा तनाव–थरुहटद्धारा ४ सवारी साधानमा आगजनी
Nextअसुरक्षित सेक्स गर्नेमा एकल महिलाको सङ्ख्य बढी
सगरमाथा र अन्नपूर्ण क्षेत्रमा निःशुल्क वाइफाई
२७ माघ २०७३, बिहीबार ०२:२४
कांग्रेसको चेतावनीः निर्णय उल्ट्याए, सिस्टम बिग्रन्छ
६ फाल्गुन २०७४, आईतवार ०४:१८
सिडियो आफैंले ग्याँस लुट्न थाले
८ पुष २०७२, बुधबार ०२:१०
‘दोस्रो चरणको निर्वाचनमा पनि एमालेको बहुमत’ – ओली
७ असार २०७४, बुधबार ०२:०२